Ndiyazi ukuba ngubani endimvotelayo | Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 26, 2007 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Nantso ke, bantu… oyena Mongameli wokugqibela! UChristopher Walken! Ngaba unokuyithelekelela intetho yokwamkela? Iya kuba yinto entle!
Mhlawumbi sidinga intsimbi yenkomo kwiNdlu eNtshonalanga.
Ndikhumbula ukukhutshwa nguye ndisemncinci xa ndibukele iDeer Hunter kwaye bendi fan okoko. Ndicinga ukuba ndibukele i-Walken Saturday Night Live specials amaxesha aliwaka.
I-PS: Ewe, yinto yokuhlekisa! Kodwa iyahlekisa. Bendiqala ukuzenza ongeyena kwi-Walken okoko ndabona oku.
Nantsi enye endiyirekhodileyo ngokuhlwanje… isicatshulwa besivela Walken kaMongameli 2008 iphepha lasekhaya. Ndazise ukuba kufuneka ndiyeke ukubhloga kwaye ndibengumlingisi we-Walken… okanye hayi.
[iaudiyo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2007/03/karr_walken.mp3]
Ukufunda ukukhwela iibhayisikile kunye nesoftware yokwakha
Mar 26, 2007 ngo 9:36 PM
ahh yeyona nto ndiyithandayo .. okoko wenza loo vidiyo yomculo .. kulapho adanisa khona .. ndaqala ukuqaphela ukuba wayengumhlekisi .. okanye xa wayesenza loo nto kwi-SNL .. nge 'More cowbell'. , .. indoda ebindenza ndiqhekeze!
Mar 27, 2007 ngo-12: 30 AM
I-Walken iklasikhi. Ndiyamthanda lo mfo. Ezo skits kwi-SNL apho azama ukulukuhla khona ikhamera (umntu) kwaye eqhubeka nokuzama ukumenza ahlale endaweni yakhe.
Ukuzenza olungileyo uDoug! Ngokuqinisekileyo unayo loo NY twang goin. 😉
Mar 27, 2007 ngo-5: 59 AM
Enkosi, Tony. Kwafuneka ndizabalaze. Ndikhulele e-Connecticut ndaye ndanegama eligciniweyo phantsi ... ndade ndaya eVancouver, BC apho ndaya khona kwisikolo samabanga aphakamileyo ndaza ndakhatywa ngempundu ukuze kuvakale ngathi yiYankee.
Ke, xa ndibuyela emva, ndayeka ngokukhawuleza "eh?" ekupheleni kwemibuzo yam…
Ndingaba ngomnye wabambalwa abanokuba nencoko nomntu ovela kulo naliphi na ilizwe (okanye nakwilizwe) kwaye ekupheleni kwencoko ndithetha ngendlela yabo.
Mar 27, 2007 ngo-9: 24 AM
Kwakukuhle apho uDoug…
“Hayi, hayi, hayi… nceda ungahambi. Sukuhoya ukujikeleza, ukungxola kwendoda ehluphekileyo, mandithi, hayi… .. andinabuganga. Amehlo am abanzi amhlophe, anomsila omhlophe. "
UChristopher Walken, Ilizwekazi
Mar 27, 2007 ngo 1:54 PM
Mar 27, 2007 ngo-9: 40 AM
UChristopher Walken omdala okanye uChristopher Walken omtsha?
Wenze iimovie ezininzi ezimbi kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Ahh, kodwa noChristopher Walken ombi ngumsebenzi omhle!